London Bridge | Vaovao momba ny dia
Tetezana any Londres
Maria | | Fialantsasatra any Eropa, Londres
Sary | Fitsangatsanganana kolontsaina
Ny Tower Bridge, torolàlana Victoria izay mahavariana eo akaikin'ny Tower of London, dia matetika mifangaro amin'ny London Bridge, tetezana tsotra kokoa amin'ny fahitana izay any atsinanan'ny Tower Bridge, ary izany no voalohany naorina nanatevin-daharana ny moron'ny Thames roa.
1 Tantaran'ny Bridge Bridge
2 Inona no ho hita eo amin'ny Bridge London
3 Ahoana ny fomba hahatongavana any London Bridge?
4 Ora sy vidiny
Tantaran'ny Bridge Bridge
Eo anelanelan'ny Cannon Street Railway sy ny tetezana Tower Bridge no misy azy io, eo amin'ilay toerana nisy tetezana nandritra ny 2.000 XNUMX taona.
Ny voalohany tamin'izy ireo tao Thames dia namboarin'ireo Romana tamin'ny hazo tamin'ny taona 46 am.fan.ir. ary nianjera tamin'ny diany. Taty aoriana tamin'ny vanim-potoana sakson dia tsy nila filàna tetezana intsony tamin'io fotoana io satria ny ony no faritry ny fanjakan'ny Mercia sy Wessex.
Taorian'ny fahasimban'ny tetezana tamin'ny 1136, tapaka ny hevitra fa hosoloany vato iray. Nandoavana hetra vaovao hamatsiana azy io ary nanomboka ny fananganana azy tamin'ny fotoana nanjakan'i Henry II tany Angletera tamin'ny taona 1176. Naharitra 33 taona vao vita ary tsy vita raha tsy tamin'ny fotoana nanjakan'i John I an'ny Angletera tamin'ny 1209.
Ny sary sokitra tamin'ny vanim-potoana fahagola dia nampiseho fa ireo tranobe misy rihana hatramin'ny fito dia natsangana teo amin'ilay tetezana, izay vetivety dia feno fivarotana, trano ary trano fiangonana mihitsy aza.
Sary | Towerbridge.org.uk
Ny faritra atsimo amin'ny tetezana dia nanjary iray amin'ireo toerana malaza indrindra tany Londres, satria hita teo ireo lohan'ny mpamadika. Ny lohan'i William Wallace no voalohany naseho tamin'ny besinimaro tamin'ny 1305, nanomboka fomban-drazana iray izay naharitra efa-jato taona lasa izay. Ny loha hafa napetraka teo amin'ny Bridge London dia i Thomas More tamin'ny 1535 na i Thomas Cromwell tamin'ny 1540.
Tany amin'ny faran'ny taonjato faha-30 dia tapaka ny hevitra hanavao ny tetezana sy hanolo azy io amin'ny hafa, satria nanjary tery ary atahorana ny fivezivezin'ny renirano. Drafitra famolavolana vato dimy andohalambo namboarina XNUMX metatra atsinanan'ny toerana voalohany no voafidy.
Tamin'ny 1924 nilentika ny tapany atsinanana amin'ny tetezana ka tsy maintsy nosoloina tetezana maoderina kokoa izy io. Tamin'ny 1962, ny tetezana tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nopotehina vato ary naterina nankany Arizona rehefa nividy azy ilay mpandraharaha Robert McCulloch mba hampiasaina ho mpizahatany eo amin'ny Farihy Havasu. Ny Bridge Bridge London ankehitriny dia natsangana teo anelanelan'ny 1967 sy 1972 ary notokanan'ny Queen Elizabeth II tamin'ny 1973 tamin'ny fomba henjana izay mahazatra ny 70.
Sary | Tripsavvy
Inona no ho hita eo amin'ny Bridge London
Ao amin'ny faritra ambanin'ny tetezana no ahafahantsika mankafy ny London Bridge Experience, manintona iray mifandray amin'ny tantaran'ny Bridge Bridge London nandritra ny 2.000 taona.. Ny hetsika dia tanterahin'ny mpilalao sarimihetsika ary misy fiatraikany miavaka isan-karazany natao hitaterana ireo mpitsidika an'i Londres taloha. Hiaina ny Afo Lehibe any Londres ianao, hijery ny mpanjakavavy mpiady Boudica miady amin'ny Romana, ary handre tantara momba an'i Jack the Ripper.
Ety ivelany no ahitanao sary sokitra miendrika fanjaitra any amin'ny faritra atsimo. Mampatsiahy ireo fanjaitra 30 izay nananan'ny tetezana teo aloha io asa io, izay nanatonana ireo lohan'ny mpamadika. Ho fanampin'izany, misy fomba fijery mahafinaritra momba ny Thames sy ny Tower Bridge toa an'i Victoria avy eto. Eo amoron'ny tetezana dia misy bar sy trano fisakafoanana ahafahanao misotro.
Ahoana ny fomba hahatongavana any London Bridge?
London Bridge dia miorina amin'ny 2-4 Tooley St. ary mampitohy ny distrikan'i Southwark afovoan'i Londres sy ny distrika ara-bola. Ny tetezana dia azo aleha avy amin'ny gara London Bridge, na dia misy fidirana tsara kokoa aza ny tobin'ny fantsona Monument.
Ora sy vidiny
Ny London Bridge Experience dia misokatra isan'andro (afa-tsy ny 25 sy 26 desambra) manomboka amin'ny:
Alatsinainy ka hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny 10 maraina. amin'ny 17 hariva. (miaraka amin'ny fizahana voalohany amin'ny 10:30 maraina).
Sabotsy sy alahady, manomboka amin'ny 9 ora sy sasany ka hatramin'ny 30:18 hariva. (miaraka amin'ny fizahana voalohany amin'ny 10:00 maraina).
£ 26.95 (amin'ny biraon'ny boaty) na £ 19.95 (an-tserasera) ho an'ny olon-dehibe
£ 21.45 (amin'ny biraon'ny boaty) na £ 17 (an-tserasera) ho an'ny tanora 5-15 taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Tetezana any Londres
Rahoviana no tsara kokoa ny mitsidika an'i Madrid
Peratallada, inona no ho hita